काठमाडौं । १४ माघ ०७६, अखिल नेपाल ढुवानी मजदुर संघले नेपाल मार्बल व्यापार संघसँग पेश गरेका मागहरू आंशिक सम्बोधन भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरेको छ ।
अखिल नेपाल ढुवानी मजदुर संघले नेपाल मार्बल व्यापार संघलाई गत मंसिर १९ गते पेश गरेको २२ बुँदे मागमा बाँकी १७ बुँदामा १ महिनापछि पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
मजदुर संघले पेस गरेको मागपत्रको (पूर्णपाठसहित)
अखिल नेपाल ढुवानी मजदुर संग मार्वल एरिया कमिटिले नेपाल मार्वल व्यापार संघ संग २२ बुदे माग पेस गरेको छ । गोयल मार्वल ट्रेडर्समा कार्यरथ उपेन्द्र पवन दाइने हात काटीदा पनि कुनै सुनुवाई नभए पछि मजदुर संग का अध्यक्ष यादब के सी माग पेस गर्न जानकारी गराउनु भयो । पेस गरिएको माग पत्र
विषयः मागपत्र पेश गरिएको बारे ।
अखिल नेपाल ढुवानी मजदुर संघ ढुवानी क्षेत्रमा कामगर्ने सम्पूर्ण श्रमिकहरुको छाता संगठन रहेको यहाँलाई विदितै छ । यसै गरी ढुवानी क्षेत्र अन्तर्गत अखिल नेपाल ढुवानी मजदुर संघ मार्बल एरिया मूल कमिटी मार्बल दवानी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको हक हितमा विगत लामो समय देखि काम गर्दै आएको समेत यहालाई अवगत नै छ । यस क्षेत्रमा विगत लामो समय देखि कायरत श्रमिकहरु श्रम ऐन २०७४ , श्रम नियमावली २०७५ बमोजिमका आधारभुत अधिकार समतबाट बन्चित हुदै आएका तथा श्रमिक भएर पनि श्रमिकको रुपमा नआएको अवस्था छ । न्युनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षा समेतबाट बन्चित हुन परेकोले जिवन यापनमा निकै कठिनाई उत्पन्न भएको छ । अतः यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुका हितलाई ध्यानमा राखि यस संघले श्रम ऐन २०७४ को दफा १२३ बमोजिम निम्न लिखित मागहरु पेश गरेको छ । यस संघले राखेका मागहरू उचित रुपमा संबोधन नभएमा श्रम नियमावलीको नियम ६८ र ६९ बमोजिम संघ अगाडी बड्ने अनुरोध छ ।
१, सम्पूण मार्वल गोदाममा काम गर्ने मजदुरहरुलाई सो कम्पनीले परिचय पत्र अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्ने । २०७६ साल भदौ १४ गते नेपाल मार्बल व्यापार संघमा परिचय पत्रको लागि दिएको निवेदन उपर सुनवाई नभएको ।
२, गोदममा इन्डियन ट्रक अन्लोड गर्दा केजीको रु १ ( एक रुपैया ) दिनु पर्ने ।
३ ,गोदाममा इटालिएन टक अल्लोट गर्दा केसीको रु १ . ५० ( एक रुपैया पचास पैसा दिनु पर्ने ।
४, गोदाममा इन्डियन मावल तथा ग्रेनाइट लोड अन्लोड गर्दा बर्ग फिट रु ८ . ५० ( आठ रुपैया पचास पैसा ) दिनु पर्ने ।
५ , इटालियन मार्वल लोड अन्लोड गदां वर्ग फिट रु १० ( दस रुपैया दिनु पर्ने ) ।
६, कोटा लोड अन्लोड गर्दा पिसको रु २० ( बीस रुपैया बिनु पर्ने ) ।
७ , चिप्स २० केजी बोराको रु २० ( बीस रुपैया ) दिनु पर्ने ।
८, टाईल लोड अन्लोड गर्दा बर्गा फिटको रु ३ ( तीन रुपैया ) दिनुपर्ने र एक तला माथी लग्दा वर्गा फिटको रु १ . ५० ( एक रुपैया
पचास पैसा दिनुपर्ने ) ।
९, उपत्यका बाहिर सामान ढुवानी गर्दा सामान लिने पाटी संघ आपसी समझदारी गरि लीने
१०, उपत्यका बाहिर सामान धुवनी गर्दा अनलोड नगरेमा पाउनु पर्ने बग फिट रु . ८ रुपैयाले नै पाउनु पर्ने ।
११, गोदाममा वा गोदाम बाहिर काग गर्दा गर्दै मार्वल ग्रिनट टुट फुट भई घाउचोट लागेमा समपूर्ण खर्च सो कम्पनीले नै बेहोर्न पर्ने र
काम गर्न नसक्ने समयसम्म दैनिक रु ७०० ( सात सय ) को दरले दिनु पर्ने ।
१२ , सामान ढुवानी गर्दा २० फिट भन्दा माथि बोक्न परेमा प्रत्येक २० फिटको रु ५ ( पाँच रुपया ) दिन पर्ने ।
१३, साईटमा इन्डियन गाडी अन्लोड गर्दा वर्ग फिटको रु . ८ ( आठ रुपैया ) को दरले दिनु पर्ने
१४, इन्डियन गाडी गोदाममा अनलोड गर्दा खाजा खर्च प्रति व्यक्ति रु १५० ( एकसय पचास ) दिनु पर्ने
१५, गोदाममा काम गर्दा सम्पूर्ण मजदुरहरुलाई सेफ्टी सामान उपलब्ध गराउनु परने
१६, गोवममा काम गर्दा ट्वाइलेट डेस चेन्ज गर्ने रूम, खाने पानी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१७, गोदाममा काम गर्ने सम्पूर्ण मज ढुवानीरहरुलाई रु . १५ , 00 , 000 ( पन्द्र लाख ) को दरले प्रत्यक व्यक्तिको जिबन बिमा र
दुरघटना बिमा हुनुपर्ने ।
१८, सम्पुर्ण गोदाममा काम गर्ने मजदुर साथिहरूलाई दैनिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन पर्न ।
१९, सम्पुणं गोदाममा सय भन्दा तल १ पिस लान परेमा १२ सय लिईने ।
२०, गोदाममा धेरै पिस सारेर लोडअन्लोड गर्न परेमा सारेको पैसा दिनु पर्ने ।
२१, सम्पूर्ण मार्बल गोदाममा १० ( बश ) बर्ष भन्दा माथि काम गरेको मजदुरले काम छाड्नु परेमा रु . १० , ०० , ००० ( दस लाख
रुपैया) उपदान स्वरुप उपलब्ध गरिनु पर्ने ।
२२, अन्तराष्ट्रिय मे दिवसमा सम्पूर्ण मजदुरहरुलाई विदाको प्रावधान गरीयोस् ।